January, 2019 | Otu Di na Nwunye
January 29, 2019 + Ozi ndị a, New York, North America, United States
25 Akụkọ ihe mere eme na ihe ọchị banyere Bronx
"25 Historic & Fun Facts About the Bronx" dere site Elisa Valentino. Elisa bụ onye na-edekọ akwụkwọ njem Travelin 'Cousins ​​na nwanne ya nwanyị bụ "Travelin' Tanya." Ọ na-ebi na Long Island, New York na ụmụ ya nwanyị abụọ na nkịta ya Punkin. Onye ọchụnta ego nke onye ọrụ ọkachamara ya gụnyere azụmahịa dịgasị iche iche na egwuri egwu, ikikere na ụlọ ahịa ahịa ahịa, ọ bụ ugbu a ... GỤKWUO
January 25, 2019 + Ụbọchị Njem, Europe, Monaco, kasị Popular, Nhazi njem
Na-eme njem njem ụbọchị na-aga Monaco ma ọ bụrụ na ị na-anọ n'ime awa ole na ole nke obere obodo a mara mma. Monaco, obodo kachasị na 2nd n'ụwa niile na Vatican City, bụ 2 km & sup2; nke ezi obi ụtọ na French Riviera. Iji kwuo na ọ mara mma na-ejideghị eziokwu ahụ, Monaco enweghị ajụjụ ọ bụla n'ime obodo ndị kachasị mma na Europe, ... GỤKWUO
January 22, 2019 + Ime Ego, SEO, Njem ịde blọgụ
Ihe Ntuzi Nsuso 5 Na-emekarị Ihe Nlekọta Njem
Otu n'ime nsogbu ndị ọhụrụ na-echekwa ndị na-ede blọgụ bụ ihe doro anya - ha anaghị ama ihe ha na-eme ruo mgbe ha mehiere. O mere anyị n'ụzọ nkịtị ọtụtụ narị ugboro. Site na imewe saịtị, na mgbasa ozi mmadụ na ebe nrụọrụ weebụ, na nchịkọta nke usoro ihe omume anyị, ọ bụ nanị site na nkụda mmụọ na ọdịda nke anyị na-agbanyeghị weghazie ọdịda anyị na ihe ịga nke ọma .... GỤKWUO
January 14, 2019 + Nri na ihe ọṅụṅụ, Ozi ndị a, Peru, South America